မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေးသုံး ပစ္စည်းများ KIO ပိတ်ထားဆို
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေးသုံး ပစ္စည်းများ KIO ပိတ်ထားဆို
မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေးသုံး ပစ္စည်းများ KIO ပိတ်ထားဆို	ဆိုင်းအောင်	| အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၅၅ မိနစ်	ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ မြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်လုပ်ငန်းများသုံး ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ တင်သွင်းလာခြင်းကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေ တပ်ရင်းများမှ ပိတ်ထားကြောင်း KIO ပြောခွင့်ရှိသူ ဦးလနန် ကပြောသည်။ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက် ဝိုင်းမော်၊ ကန်ပိုင်တီ လမ်းကြောင်းမှတဆင့် တရုတ်ပြည်က တင်သွင်းလာသော ဘိလပ်မြေနှင့် သံထည်ပစ္စည်းများကို KIO ဒေသခံ တပ်ရင်းများ ထိန်းချုပ်သည့် တပ်ရင်း (၃) လဖိုင် ဂိတ်က တင်သွင်းခွင့် ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်နေသည်ဟုလည်း ဦးလနန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“စစ်ဖြစ်တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မြစ်ဆုံအတွက် သယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တင်းသွင့်ခွင့် မပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ စီမံကိန်းမှာ ပစ္စည်းပြတ်လပ်လို့ လောလောဆယ် စီမံကိန်ကြီး ရပ်တန့် ထားရတယ်လို့ သိရတယ်” ဟုဆိုသည်။ KIO နှင့် အစိုးရတပ်တို့အကြား ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေခြင်း ဖြစ်သည်။သို့သော် မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မှု ရပ်တန့်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှတ် ၁ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းက မိုးတွင်းကာလ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းကို ခေတ္တရပ်နားထားပြီး၊ ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်သည်နှင့် လုပ်ငန်းများ ပြန်လည် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုလ ၁ဝ ရက်နေ့ နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ကန့်ကွက်မှုများရှိနေပြီး၊ စာရေးဆရာ ကိုတာ၊ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)၊ မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်နေသူ ဦးဇော်မြင့် တို့မှလည်း ယခုလ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီမြစ် ထိန်းသိမ်းရေး ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ကာ မြစ်ဆုံဆည် ဆောက်လုပ်ရန် မသင့်ကြောင်း ဟောပြောပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ကြသည်။သို့သော် ဦးဇော်မင်းက မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မှုသည် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုကာ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂမှပင် ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ခွင့်မရှိကြောင်း နေပြည်တော် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသွားသည်။ကျင်းပဆဲ လွှတ်တော်များ၏ ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးများတွင် နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းများနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်သည့် စီမံကိန်းများအတွက် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူသင့်ကြောင်းလည်း အမတ်များက ဆွေးနွေး ကြသည်။ဦးလနန်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရသစ်၏ မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်မှုသည် လူထုဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်နေပြီး၊ KIO အနေဖြင့် ယင်းရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို အစဉ်တစိုက်ကန့်ကွက် သွားမည် ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးလည်း ပါဝင်ကန့်ကွက်ရန်လိုကြောင်း မဇ္ဈိမကိုပြောခဲ့သည်။၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တည်ဆောက်မှုဖွင့်ပွဲ စတင်ခဲ့သည့် မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှာ ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နှင့် ၂၇ မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး စီမံကိန်းကို အမှတ် ၁ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရုတ် China power Investment Corporation –CPI တို့ အကျိုးတူ ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး ပြည်တွင်း၌ ပြုလုပ်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ KIO မှကြိုရောက်	ပင်လုံ ကတိကဝတ်များ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ကချင်အတိုင်ပင်ခံ သဘောထားရှိ	အစိုးရနှင့် KIO ဆွေးနွေးပွဲ ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်မည်	KIO နှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတကာ လေ့လာသူများ မဖိတ်ခေါ်နိုင်	မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ဒုဗိုလ် တဦး ပြန်လွတ်လာ	အစိုးရနှင့် KIO မေလ မကုန်မီ တွေ့ဆုံဖွယ်ရှိ၊ လေ့လာသူများကိစ္စ ညှိနှိုင်းနေရဆဲ	ဦးဘရန်ရှောင်၏ ဖြောင့်ချက်ယူသူအား စစ်ဆေးရန် တင်ပြချက် ထပ်မံ ပယ်ချခံရ	Who is Online
We have 35 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved